PVC hose dzakateerana FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Mingwang Bvunzo Zvishandiso
Nei isu Mingwang？
Flat Dripper Tepi
Micro Spray Tepi
Fogger & Mhute
Insect Kudzivirira Sprinkler
Fittings & mavharuvhu
Kiya Nut Nut Fittings Yedonhwe Tepi
Kiya Mhete Fittings Yekudonhera Tepi
Mini Valve Yekudonhera Tepi
Mini Valve YeTubing
Sefa & Venturi Fertilizer Injector
Zvishongedzo zvakateedzana FAQ
Donhwe kudiridza dzakateerana FAQ
Sefa dzakateerana FAQ
Micro spray nzvimbo FAQ
Pamhepo Drippers FAQ
PVC hose dzakateerana FAQ
Mufuridzi akateedzana FAQ
Ndechipi saizi PVC inokodzera yandinoda?
Chinhu chakanyanya kukosha kana uchishanda ne PVC pombi uye Fittings ndiro zita saizi. A 1 " kukodzera Inokwana pa1 " pombi, zvisinei nekuti imwe iri purogiramu makumi mana kana makumi masere.
Zvakanaka here kushandisa PVC pombi yemvura inopisa?
Kukanganisa kukuru ku PVC pombi ichokwadi kuti haigone kuva kushandiswa ne mvura inopisa kunyorera. Kana uchionekwa mvura inopisa, PVC acharukwa.
PVC hose inochinja?
Apo vanhu vazhinji vanofunga nezve PVC, ivo vanofunga nezve mapombi akaomarara machena uye e grey avanoshandisa mune kwavo dzimba dzemapombi dzemvura. Asi zvakadaro PVC chinhu chakasiyana-siyana, uye zvinogona kudaro kuchinja pamwe nekusimba. Kureba uku inochinja PVC pombi inogona kukupa kuita kwakawanda kumhanyisa mitsara uko kwakasimba mapaipi asingaende.
PVC hosi mafuta anopokana here?
Unogona PVC uye mamwe mapurasitiki hoses kushandiswa kwemafuta uye gasi? Muchidimbu, mhinduro ndeyokuti kwete, havagone. ... Nekuda kwehunhu hwe PVC uye mamwe mapurasitiki zvakare, haana kukodzera kushandisirwa gasi remafuta kana parafini. PVC uye mamwe mapurasitiki anokanganisika zviri nyore munzvimbo dzine tembiricha yakakwira, uye anogona kudonha kana kutsemuka
Mujuru unodya PVC inochinjika?
Izvo hazvipikisane nezvipembenene, kunyanya, muvhi ave achizivikanwa ku idya it. Kutsvakurudza kwakaratidza inoshanduka PVC inoita kwete kukwezva muvhi, zvakadaro kana inochinja pvc inoiswa pakati pe mufi dendere uye sosi yekudya, vanogona kuyedza idya nzira yavo kuburikidza nayo
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, LTD inogadzwa muna 1985 ...
Guta reBaoding, Dunhu reHebei, China